Booliska Somaliland Oo Toogasho Ku Dilay Wiil Reer Puntland Ah Oo Xirt...
Booliska Somaliland oo toogasho ku dilay wiil reer Puntland ah oo xirt…
Boorama (Wararka Maanta)-Wararka aan ka heleyno magaalada Boorama ee gobolka Awdal ee Somaliland waxay sheegayaan in ciidamada booliska ee ka howlgala magaaladaas ay caawa toogteen wiil dhalinyaro ah oo ku lebisnaa dharka buluuga ah ee calanka Soomaaliya.
Wiilka la toogtay oo ahaa 21-sano jir ayaa kasoo jeeday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana lagu magacaabi jiray Ibraahim Salaad Ibraahim.
Ibraahim Salaad waxuu sanadkii labaad Kuliyadda Engineering-ka ka dhiganayey Jaamacadda Camuud qeybteeda magaalada Boorama.
Wararka Maanta : Maraykanka oo difaacay duqeymihii uu fuliyay Soomaaliya todobaadkii hore
Dilka wiilkaan ayaa Maqribkii ka dhacay afaafka hore ee magaalada, kadib markii ay boolisku qabteen isagoo ka soo laabtay jimicsi uu u aaday meel Dooxo ah oo banaanka ka ah magaalada, sida ay noo sheegeen ehelkiisa.
Inta aan la dilin Ibraahim waxaa la sheegay in muran kooban oo ku saabsan dharka uu ku lebisan yahay uu dhex-maray booliska iyo asaga, kadibna uu dilay mid ka mid ah askartii qabatay.
Marar badan ayey ciidamada booliska Somaliland xabsiga dhigeen dhalinyaro soo xiratay dharka u eg calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, balse hadda waxaa muuqata in boolisku dilayaan qofkii ay ku arkaan wax u eg calanka Soomaaliya.
Deegaanada Somaliland waxaa ka jirta caburin lagu hayo shacabka, taas oo marar badan aad loogu dhaliilay xukuumadda.
Hadii adiga oo wata dhar u eg ama ka sameysan mid ka mid ah calamada dalalka caalamka aad tagto Somaliland, maamulku kuma dhibsanayo, balse hadii laguugu arko calanka buluuga ah ee Soomaaliya, waxaa khatar geleysa naftaada, ciqaabta ugu yar oo dadka lagu qabto calanka buluuga ah ay maraana, waa xarig iyo jir-dil.
Abiy oo hanjabaad cusub oo yaab leh soo saaray kadib guul-darradii gob…
Wararka Maanta : Paul Pogba Iyo Ronaldinho Oo Kuwada Caweeyay Kuna Kulmay Hotell Ku Yaala...
Wararka Maanta : Deg Deg: Farmaajo oo diyaarsaday 120 Xildhibaan iyo RW Rooble oo Talaabo...
Wararka Maanta : Xasan Sheekh oo ku baaqay in la fuliyo heshiiskii doorashooyinka - Caa...
Wararka Maanta : Dhakhaatiir reer Somaliland ah oo madaarka Muqdisho taransit ku ahaa oo...
Wararka Maanta : Musharaxiinta oo war kasoo saaray xilal ka-qaaditsii uu sameeyey Roobl...
Wararka Maanta : Ilhaan Cumar oo madaxweyne Biden ka codsatay arrin ku saabsan...
Warka Caalamka15 mins ago
Wararka Videos29 mins ago
Caalamka Videos12 hours ago
Caalamka Videos16 hours ago